पोलेको मकै खानु फार्इदा कि बेफाईदा ? पढ्नुहोस् आश्चर्यमा पर्नु हुन्छ ! | Rajmarga
एजेन्सी – कुनै समय यस्तो थियो, पहाडी र हिमाली भेगका सर्वसाधारण खाना होस् वा खाजा सबैमा मकै नै उपभोग गर्थे । त्यतिबेला धानखेत नहुँदा स्थानीय स्तरमा अत्यधिक परिमाणमा उत्पादन हुने मकै हिमाल र पहाडका मानिसको प्रमुख खाद्यान्न थियो । चामल कि त पहुँचवाला कि राम्रै आम्दानी हुनेले चाडबाडमा उपभोग गर्न पाउँथे ।
अहिलेको मौसममा मौसम बदलिरहेको छ । वर्षाको मौसममा तपाईँलाई सबैभन्दा बढी के खान मन पर्छ ? प्रायःजसोले वर्षाको मौसममा तातो–तातो पकोडा, कफी वा चिया खान मन पराउँछन् तर बर्षायाममा पोलेको मकै खानुको छुट्टै आनन्द छ । हामी रहरले पोलेको मकै खाने गर्छौँ ।
Previous post: बालबालिका विद्यालय नपठाए अभिभावकमाथि कारबाही हुने
Next post: शारिरिक सम्बन्ध अगाडि युवतीहरुले ढाट्ने ५ कुरा
बुटवलमा कोरोना संक्रमित एक पुरुषको मृत्यु
भेन्टिलेटर र आइसियु सञ्चालन गर्ने जनशक्ति अभाव
उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा ४०८ जना सक्रमित
एकैदिन थपिए २ हजार बढी कोरोना संक्रमित, संक्रमितको संख्या ६१,५९३ पुग्यो
प्रधानमन्त्रीको चार जना सल्लाहकार र स्वकीय सचिवलाई कोरोना संक्रमण